Iimpawu ezaziwayo eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Yilapho usapho lwethu luhlala eMelbourne!Phatha umdlalo kude njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.澳洲唐人街- 中华澳网China Town News澳洲唐人街;澳大利亚华人社区和主流新闻媒体Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba Iimpawu ezaziwayo eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Yilapho usapho lwethu luhlala eMelbourne!Phatha umdlalo kude njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.澳洲唐人街- 中华澳网China Town News澳洲唐人街;澳大利亚华人社区和主流新闻媒体Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba
Ukuthenga iholide encinci! Isikhokelo samva nje nesibanzi kakhulu kwiivenkile ezisithoba zeMelbourne
Usuku olulandelayo ngomso ngumnyhadala weCherry Blossom ~ A amaza enkulu yeMornington emnandi ingena ngaphakathi!
Into entsha! Uhlaselo lwequbuliso eMelbourne CBD lwaqinisekiswa njengogrogrisi, kwaye i-ISIS yabhengeza uxanduva kuyo! Kodwa kweli lizwe, kukho amaqhawe amaninzi angasigcinanga ...
[Isikhokelo seScholarship] Isishwankathelo sama-25% sezifundo zakutshanje ezivela kwiiyunivesithi zaseOstreliya!
Isibhedlele sase-Australia siyaphila kwaye i-VS i-China yayilaliswe esibhedlele iintsuku ezingama-72 kwaye ithengiswe iisites ezimbini ... I-Netizens: Ngasinye sinezinto ezilungileyo kunye nezibi, siphathe rallyally!
IMelbourne izokwakha umzi-mveliso omtsha wemaski! Ubuncinci zizigidi ezingama-2.4 zemaski zokwenza utyando zinokwenziwa unyaka nonyaka
Le ngca yase-Australia isandula ukuphulukana nazo zonke ii-steaks emhlabeni kwaye iphumelele isithsaba! Ungaze uthobeke!
Iholide yaseMelbourne ilapha! I-Bendigo art + ukutya kwesikhokelo sokuhamba apha!
Imarike yezindlu yase-Australia iye yabuya kwakhona
Phuma uye kwiholide encinci, ezona ndlela zintle zokuqhuba eVictoria!
Uphuhliso olutsha kumzi-mveliso weenqwelomoya eAustralia uMzantsi Australia uza kuphehlelela indawo enamatye kwisithuba kwinyanga ezayo
Oomama abashushu abangamaSydney Chinese bane-aphoyintimenti emva kwengxabano kwiqela le-WeChat! Yabetha esitratweni ibangela ukwenzakala! Ijaji yakugweba. . .
Imithombo yeendaba yase-Australia yatyhila ukuba abafundi abangama-58 bamazwe aphesheya banyanzelwe ukuba batyibilike kwigumbi elinye! Indawo yokuhlala ayimlingani njengombethe wehagu ... indlu ayirhangqi kwaye inkunkuma yonke indawo!
Indoda kunye nesoseji yakhe yenza iAustralia "yajongana nengxaki yokusinda!" Inkulumbuso yeza apha ukuzokuphawula, amajelo eendaba aphathela ingqalelo, kwaye bonke abathengisi base-Australia baxabana!
Funda i-Angelababy's smart, ii-eyelashes ezintle kunye namehlo amnandi
Kuhle! Kubonakala ngathi yonke iAustralia ibingelela eTshayina ngoNyaka oMtsha! IAustralia yenze konke okusemandleni alo Msitho weNtwasahlobo
Nceda ujonge ulawulo lwe-matcha! Iivenkile eMocun ziya kwenza ulawulo lwe-matcha lwangaphakathi luvutha
Intsholongwane ye-Corona entsha43
Unyakamali omtsha kunye nemozulu entsha, iAustralia kaJanuwari eNtshukumo entsha iyothusa! Iivisa zabafundi ezenziwe lula, izibonelelo zentsapho ezincitshisiweyo, ukunyuka kwamatyala ngombane, iindleko zokundwendwela ezibizayo… konke ofuna ukukwazi kulapha!
Ukuvavanywa esitratweni ukuvavanya ubuntu eOstreliya: Ngaba uye wayiphosa iidola ezili-100 zaseOstreliya?
Unoyolo! Umfazi waseTshayina wase-Australia wathula washiya kude umqeshi wakhe malunga ne-42, XNUMX yeedola, engakhange afunyanwe ixesha elide
Ukufudukela kwelinye ilizwe31
Abaphambukeli base-Australia abafake inethi bazisa ukukhula okungalunganga kokuqala kwiminyaka engama-74
Isibhengezo esisemthethweni! Imeko yonxunguphalo eVictoria yandiswa iinyanga ezi-6! Inkampani yeva ukuba ikhuphe kwangoko utyalo-mali lwe-7 yezigidi
Yilumkele i-rhinitis / i-asthma / i-allergies yento epholileyo! Lo nyaka uya kuba yeyona hay fever ebi kakhulu kwiminyaka engama-50
I-CEO ye-Amazon iBezos iphumelele izindlu eziLos Angeles ezibiza kakhulu ngezigidi ezili-1.65 zeedola
Intwasahlobo yephepha lamafutha! Imbewu yeMango yaseOstreliya: Iphulukene neepawundi ezili-28 zamafutha omzimba kwiintsuku ezingama-12.8
Utyalomali lwase-Australia kunye nokuthenga uthotho lweempahla ezomileyo! Inqaku likukwazisa ngenkqubo yokuthenga indlu e-Australia
UCai Ming utyhilele umgca ophambili we-Spring festival Gala: ukhohlakele kakhulu
Imithombo yeendaba esemthethweni yakhalimela u-Li Na ngokungabongi kunye "nomcebisi" wokubamba uhanahaniso
Ukufuna ukuba ixabiso eliphantsi kwaye elimnandi ngokwenene akukho nzima!